Ny valim-panofana LED fanofana LED dia nahatratra IP65
Ampiasaina indrindra amin'ny pcrfonnance, fivoriana, fampirantiana, tsimparifary, fototra, fanokafana, fampiroboroboana ary hetsika hafa, ny firafitry ny lampihazo. jiro sy fitaovana fanamafisam-peo ary toerana fanofana fitaovana manokana. Gamut Colour Gamut
Fanaparitahana hafanana vy
Tabilao avo lenta avo indrindra
Milanja maivana sy mora entina
Super maivana teknika Volavola tery tery, hatevin'ny kabinetra 80nun fotsiny, mora kokoa ny mitondra sy kabinetra maivana fotsiny 13kg, Mora lnstall ary mitahiry ny vidin'ny fitaterana.
150 mitsivalana, sary mitsivalana 120 mitsivalana 120, ataovy izay misy faritra ijerena lehibe kokoa ny efijeryo, afaka mahazo vaovao avo lenta ianao amin'izay lalana alehanao.
Sary avo lenta
Famelombelona avo / avo mifanohitra dia mety hahatratra 16 bit.
Omeo sensory mijery maro loko ianao
Fifanoherana avo 4000: 1
1. Fisarahana madiodio, azo ahitsy, mora tazonina kokoa.
2. Feo ambany, ambany fanjifana, miantoka ny androm-piainana lava.
3. Ny tontonana vita amin'ny aliminioma manaparitaka faran'izay betsaka dia afaka mitsimbina be ny vidin'ny herinaratrao.
4. Chip LED LED kalitao, zoro fijerena malalaka, fisaka tsara, fanoherana ny statika, famirapiratana avo lenta, fanamafisana ambany, fitoniana tsara.
5. Manangana ny haben'ny kabinetra 500x1000mm, fametrahana haingana, fisehoana sary mazava amin'ny zoro fijerena malalaka. Karazana maody fampisehoana, mora ampiasaina.
6. Famolavolana kabinetra mahazatra, ahafahana manao habe mitovy amin'ny kabinetra dia azo ampiharina amin'ny fampisehoana pixel samihafa. Noho izany, mora kokoa ny mametraka sy mandrava ny efijery iray manontolo. Famolavolana kabinetra maivana, mitsitsy ny vidin'ny fitaterana.
7. Azonao atao ihany koa ny manao fampisehoana LED P3.9 Indoor, P3.9 ivelan'ny trano, fisehoana fanofana an-kalamanjana P4.81.
P5.95 Production Audiovisual ivelany LED Screen Screen ...
P8.925 Rindrambaiko LED azo alefa an-kalamanjana ho an'ny fiara ...
P8 LED Rental Open Rental LED ho an'ny hetsika ara-panatanjahantena